Madaxweynaha Maamulka Jubba oo gaaray magaalada Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Maamulka Jubba oo gaaray magaalada Garowe
11th July 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Madaxweynah Maamulka KMG ah ee Jubba Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Garowe ee xarunta Gobolka Nugaal, halkaasoo uu ku soo dhoweeyay Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas.
Soo dhoweynta oo aheyd mid aad looga soo shaqeeyay ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay Madaxweynaha Jubba Wasiiro, xildhibaano, waxgarad, haweenka, dhalinyarada iyo mas’uuliyiin kale.
Wafdiga Madaxweynaha Jubba ayaa waxaa la geeyay xarunta Madaxtooyada Puntland, waxaana halkaas ay si wada jir ah shir jaraa’id ku wada qabteen Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas.
Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas ayaa sheegay in booqashada Madaxweynaha Jubbaland ay tahay mid xoojineysa xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya labada Maamul.
“Waxaa sharaf weyn noo ah in maanta madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam noogu yimi booqasho gaaban , booqashadiisuna waxaa weeye xoojinta xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya Puntland iyo Jubbaland” ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
C/wali Gaas oo sii hadlayay ayaa yiri “Puntland iyo Jubbaland waxyaabo badan oo na mideeya ayaa jira , waxaa kale oo muhiim ah in laga wada tashado oo dawladaha federaalka ka tirsani ay kawada hadlaan geedi socodka nabadda Soomaaliya , xaaladda hada lamarayo iyo waxa nagaga aadan anaga inaanu wax iska niraahno sida ay Soomaaliya usocoto waa muhiim”
Sidoo kale Madaxweynaha Maamulka Jubba ayaa Axmed Maxamed Islaam ayaa dhankiisa ka mahad celiyay soo dhoweynta balaaran ee loo sameeyey, waxaana uu tilmaamay in Puntland tahay hooyada iyo aabaha Federaalka.
“Socodkaygu waxa uu ahaa bal inaan wadatashigii joogtada ahaa layeesho laysna weydiiyo bal maanta xaaladda Soomaaliya meesha ay marayso , iyadoo cidkale aan dhib loo geysaneyn bal Soomaali masiirkeeda meesha uu ku dambeyn doono in lays waydiiyo” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe ayaa sidoo kale tilmaamay in Puntland mudnaan iyo tixgelin gaar ah ku leedahay Soomaaliya , maadama ay tahay aasaasihii Dawladda Federaalka Soomaaliya markastana ay dhinac taagan tahay midnimada iyo jiritaanka umadda Soomaaliyeed.
Labada Madaxweyne ayaa ka wada hadli doona arrimaha siyaasada Soomaaliya iyo hirgelinta federaalka, iyadoo labada Maamul ay si isku si u qoonsan yihiin dowladda Federaalka, waxaana laga yaabaa in kulankooda ka soo baxo war saxaafadeed.
Puntland ayaa dhowaan diiday maamulka goboleedka cusub ee laga dhisay gobolada dhexe ee dalka, waxaana dadka siyaasada odorosa ay tilmaamayaan in booqashada Axmed Madoobe ee uu ku tagay Puntland ay la xiriirto sidii uu Cabdweli Gaas u siin lahaa taageero ku saabsan diidmada maamulka cusub ee dhowaan laga yagleelay gobolada dhexe ee dalka.
Booqashada Axmed madoobe ee Garowe ayaa ku soo beegmeysa, iyadoo aanu wanaagsaneyn xiriirka dowladda Federaalka iyo labadan maamul, iyadoo Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya uu sheegay in dhamaadka bishan Muqdisho ka dhacayo shir looga hadlayo geedi socodka Soomaaliya iyo hiigsiga sanadka 2016.
Somalia: Mogadishu hotels attack leaves over ten terrorist dead
Maamulka Puntland oo lagu tilmaamayo Qas-wadayaasha cusub ee Somalia